Umsebenzi we ibhizinisi, e imibiko yezimali, accounting, kukhona into enjalo - "Ukubekwa nokuMeda kwempahla angaphatheki" (IA). Kuyinto le ngxenye yenhloko-dolobha, okungakwazi njengokuthile okungase kuthintwe, wazibona ngamehlo, kodwa kuletha ngenzuzo inkampani noma inhlangano kanye nokusetshenziswa eside kakhulu. Ukuhlolwa amafa angaphatheki kuhlanganisa ukuhlonza ilungelo ubunikazi kubo. Icacisa izindleko, isibonelo, amabhizinisi, izimpahla angaphatheki Ungadlala indima ebalulekile, ngoba lift eliphezulu intengo, ikakhulukazi uma uletha imali enhle.
Valuation kwempahla angaphatheki - kungcono ingxenye ukuqashelwa ibhizinisi, ebanjwa phambi ukwabiwa kwempahla angaphatheki. Ngu ukuhlaziya yokuthengisa ezifana kulindeleke inani lemakethe lebhizinisi, khona-ke inani elilinganisiwe amafa eziphathekayo, futhi umehluko phakathi kwabo kanye intengo izimpahla angaphatheki.
Okwamanje, kukhona izinkampani eziningi ukuthi aqhube ehloliwe amafa angaphatheki. Ngutiphi tinsita ebasitjengisa?
- Yokunika Ilayisense - manje okuthuthukile futhi ifomu okwandile ukwabelana ubuchwepheshe ezimakethe zomnotho eenarheni ezithuthukako. Iphakheji inkampani kuhlaziywe kuhlanganisa amalayisense kokuhlaziywa, njengoba ngezinye izikhathi ingaba umthombo iyimpahla ebaluleke kakhulu enhlanganweni noma ibhizinisi.
- I-patent ku umkhiqizo we-noma yimuphi umkhiqizo, umqondo lobuchwepheshe kanye nekhambi yayo, uphawu kanye nokuhlola yalombhalo ingxenye enkulu inzuzo womnikazi wayo futhi ayinikeze ezinzuzweni ezithile, njengoba kuqhathaniswa esincintisana.
- izinhlelo Ikhompyutha namasu ekhethekile, izindlela ukuxazulula izinkinga zezimali, zokuphatha, zobuchwepheshe, ngokuthi azi-esikalini ukuze sibethula dolobha ogunyaziwe inhlangano noma ukudayiswa.
- Sokuthakazelelwa Inkampani kulinganiselwa ngokuqinile kuhlaziywe ukuhlonza izinzuzo uzothola umthengi, ekuzuzeni inkampani eqhuba, kuthandwa kakhulu phakathi abathengi kanye uletha imali enhle. Lokhu ukulinganisela libizwa abathakazelelwayo.
Ukuze lezi kanye nezinye izimpahla angaphatheki, izinhlangano eziningi, abaphathi kuba nesithakazelo ekutholeni ukubaluleka okunjengalokhu kube ingxenye inhlokodolobha ingasetshenziswa ngokuya phambili, ngoba ukufakwa yayo ukubunjwa impahla yeNkampani kunomthelela:
Ukuncishiswa inhlangano yentela ngemali engenayo.
Olawula ngevolumu ukwehla ezibanjwayo, ukudalwa isikhwama yokufuna entsha izindawo NMA.
Ukwenyuka inani lemakethe ibhizinisi.
Izimali yazo zonke izimpahla kwenhlangano.
Accounting ukubaluleka amafa angaphatheki ngesikhathi kabusha noma ekucwileni ezikweletini kwanoma inkampani.
Icacisa ubukhulu isabelo amafa angaphatheki enhloko-dolobha ogunyaziwe.
Thola izindleko izimpahla angaphatheki e ukuthenga zabo nokuthengisa.
Zikhona nezinye izinzuzo e ukuphathwa kwamabhizinisi. Futhi amafa angaphatheki kuhlanganisa futhi abasebenzi abaqeqeshwe kahle, idumela umphathi, copyright, imibono kanye neziphakamiso mayelana ukukhangisa umkhiqizo, iziphi izinzuzo endaweni indawo. Futhi indlela ngokuphumelelayo futhi efanele uzohlola amafa angaphatheki incike ukuqhubeka inkampani.
-Equestrian ezokuvakasha: inhlangano nokuthuthukiswa eRussia
I metal refractory kakhulu. Izimpawu metal
Umuthi 'Spanish Fly ": ukubuyekezwa, izincazelo, imiphumela kanye contraindications
Ukucabanga okubonakalayo kungasindisa kanjani ukuphila?